All Ebooks :: Malagasy :: Fahaiza-Manao Amin’ny Asa Fanompoana (E BOOK)
HomeAll EbooksMalagasyFahaiza-Manao Amin’ny Asa Fanompoana (E BOOK)
Fahaiza-Manao Amin’ny Asa Fanompoana (E BOOK)
Ny hoe mampandroso fahaizana dia mampandroso fahaiza-manao na paik’ ady. Ny Baiboly dia milaza fa ny fiarovana dia ho an’ ny olon hendry. Ny asa ao amin’ ny asa fanompoana dia mitaky fahaiza-manao goavana. Tena loharano ilaina tanteraka ity boky “Fahaizana Manao Ministera” ity ho an’ireo...
Ny hoe mampandroso fahaizana dia mampandroso fahaiza-manao na paik’ ady. Ny Baiboly dia milaza fa ny fiarovana dia ho an’ ny olon hendry. Ny asa ao amin’ ny asa fanompoana dia mitaky fahaiza-manao goavana.
Tena loharano ilaina tanteraka ity boky “Fahaizana Manao Ministera” ity ho an’ireo rehetra maniry ny anao ny asan’ ny ministera. Manolotra mazava tsara ny fieritreretana mety sy ny tsy mety mikasika ny ministera, ny asa hita ao amin’ny ministera, ny zavatra takiana aminao amin’ ny maha mpiasa anao ao amin’ ny ministera sy ny fomba fanaovana ny raharaha ao amin’ ny ministera.
Efa nametra-panontaniana mikasika ny asanao ao amin’ ny ministera ve ianao?Hametraka fanamby anao ity boky nosoratan’ i Dag Heward-Mills ity handehananao mendrika ny antson’ Andriamanitra sy hitarika anao hanome ny tenanao manontolo amin’ny asan’ ny ministera.